Rindrambaiko mamorona tontolon'ny kisendrasendra tampoka | Famoronana an-tserasera
Matetika ny zavakanto mavesatra intrinsika amin'izay mijery azy hanolotra fahatsapana, sary an'ohatra ary endrika misavoritaka izay mifanaraka amin'ny mpijery hafa izay tena tsy mahita na inona na inona. Noho izany ny anarany ary nanome ny anarany ho fialam-boly tsara amin'ny zavakanto avy amin'ireo mpanakanto tsy dia nisy loatra izay nandalo abstraction mba hanasokajiana ireo sangan'izy ireo.
@LandscapeArtBot dia ny kaonty Twitter-n'ity mpampiasa ity fa izy dia namolavola rindrambaiko afaka mamorona tontolo dizitaly amin'ny famaranana lehibe araka izay hitantsika amin'ny fialamboly sasany. Fomba iray ahazoana mijery zavakanto hafa amin'ny solosaina na karazana AI izay afaka mandefa tolo-kevitra tsy tambo isaina ahafahan'ny olona sasany mamorona ny tenany mitady ny endrika, loko ary dikany.
Ny masontsivana ampiasaina dia kisendrasendra tanteraka, na dia manana fetra voafetra aza izy ireo. Ho an'ireo izay milalao ny Minecraft, ny iray amin'ireo hevitr'ity mpanakanto ity dia ny mamorona "masomboly" amin'ny endrika fanaingoana izay manome fomba amam-panazavana.
Rindrambaiko iray izay nanontaniana raha afaka ataovy loharano misokatra hany ka maro ny injeniera na mpanakanto hafa no afaka nanampy ny fasika, na dia tsy sahy hanao izany aza izy amin'izao fotoana izao.
Afaka manaraka ianao ny asanao sy ny fivoaran'ny rindrambaiko avy amin'ny kaontinao Twitter @LandscapeArtBot. Toy ny amin'izao fotoana tsy ananany tranokala izao, io no fomba tokana hahafantarana akaiky izay famoahana manaraka. Nikasa ny hanao pirinty lehibe ihany koa izy mba hahafahan'ny tsirairay mividy azy ireo, koa raha liana amin'ny soso-kevitry ny kanto ianao dia aza mangataka andro ela hanaraka azy amin'ny Twitter.
El ny sisa amin'ny galeriana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Fanangonana ny tontolon'ny sary nomerika voaforon'ny rindrambaiko